“De ‘zay ihany!” -
AccueilTresaka“De ‘zay ihany!”
“De ‘zay ihany!”
12/09/2017 admintriatra Tresaka 0
Mahatratra 17 km ny halavan’ny taribin’ny JIRAMA voalaza fa nisy nangalatra tamin’ity taona 2017 ity; efa voasolo ny 15 km tamin’izany araka ny vaovao navoakan’ny hainoamanjery. Avadik’ireo mpividy halatra ho lasa vilany, na atao bolongana firaka ireo tariby ireo araka ny fanampim-baovao.
Efa ambara eto matetika ny hoe tsy ho tafavoaka ao anatin’ny fahantrana izany isika raha mbola izao no toe-tsaina. Efa mitovy amin’ny elanelan’Antananarivo renivohitra sy Ambanintsena RN2 fividianana saosisy ange ny halavan’izany tariby nisy nangalatra izany e! Tahaka ny ahoana ny fatiantoky ny JIRAMA amin’izany kanefa mimenomenona rehefa tapaka ny jiro, na maharitra ora maromaro ny delestazy, ary azo antoka fa isan’ireo mpimenomenona ireo mpangalatra tariby ireo.
Amin’ny fomba ahoana no hisian’ny fampandrosoana raha fandrobana tahaka izany hatrany no misy eto amin’ity firenena ity? Tapitra voaroba sy misy mangalatra avokoa ny fotodrafitrasa eto amintsika (fefy vy eny amin’ny marais massay, eny amin’ny tetezana, ny « batterie » amin’ireny jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro ireny, ny taribin’ny JIRAMA, ny takela-by amin’ny fifamoivoizana, sns). Voatery nametrahana mpiambina mihitsy moa etsy amin’ny digue vaovao noho ny halatra tsy misy farany.
Tokony hisy fepetra hentitra, ary sazy faran’ny henjana mihitsy hampiharina amin’ireny mpangalatra fotodrafitrasa ireny. Tokony hisy koa etsy an-danin’izany ekipa manokana avy ao amin’ny mpitandro filaminana tsy manao afa-tsy ny manenjika ireny mpamotika fotodrafitrasam-panjakana ireny. Mazava ho azy fa tsy « 4’mi » no mpividy ireny taribin’ny JIRAMA ary ireny « batterie » amin’ny herin’ny masoandro ireny fa olona manam-bola.
Tena misy karazan’olona sakana ho an’ny fampandrosoana mihitsy eto amintsika, tsy vonona ny hiasa izany velively, na homena asa izao aza. Ny handroba sy hangalatra ary hanendaka ihany no mety aminy, “De ‘zay ihany!”.